Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu Toronto na Orlando na Swoop ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ụgbọ elu ụgbọ elu si na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Toronto Pearson bụ akara dị ịrịba ama maka ụgbọ elu Canada dị oke ọnụ ka ọ na-etolite netwọkụ US.
Ememe mmalite nke ụbọchị mbụ bidoro ụzọ ụzọ anọ na-akwụsịghị akwụsị na ọdụ ụgbọ elu Orlando Sanford maka ụgbọ elu dị ọnụ ala.
Ọrụ mmeghe nke ụlọ ọrụ ụgbọ elu dị ọnụ ala siri na ọdụ ụgbọ elu Toronto Pearson na elekere 8:00 nke ụtụtụ EST wee rute n'elekere 11:00 nke ụtụtụ.
Swoop nọ na ebumnuche ime ka njem dị ọnụ ala yana ịnweta ndị Canada niile.
Taa, Swoop mere ememme ụgbọ elu mbụ ya Ọdụ ụgbọ elu Orlando Sanford. Ọrụ mmeghe nke ụlọ ọrụ ụgbọ elu dị ọnụ ala siri na ọdụ ụgbọ elu Toronto Pearson na elekere 8:00 nke ụtụtụ EST wee rute n'elekere 11:00 nke ụtụtụ.
“Obi dị anyị ụtọ na anyị na -agbasawanye netwọkụ US anyị na mwepụta nke ụgbọ elu mmalite nke taa Ọdụ ụgbọ elu Orlando Sanford, ”Shane Workman kwuru, onye isi ọrụ ụgbọ elu, Suo. "Anyị maara na ndị Canada na -achọsi ike ịga ndịda na Florida anwụ na -acha n'oge oyi a na ịdị mma ọdụ ụgbọ elu Orlando Sanford, nnweta na ịdị nso na ebe nkiri dị nso na -eme ka ọ bụrụ ọnụ ụzọ zuru oke na mpaghara ahụ."
Taa nraranye bidoro nke mbụ n'ime ụzọ anọ ọhụrụ na-adịghị akwụsị akwụsị Ọdụ ụgbọ elu Orlando Sanford maka ụgbọ elu dị ọnụ ala. N'ime ọnwa ndị na -abịanụ, SuoỌrụ ọzọ na -akwụsịghị akwụsị na Orlando Sanford ga -amalite site na Hamilton, ON, Winnipeg, MB na Edmonton, AB.
Nkọwa nke ọrụ Swoop na Orlando Sanford
Nsoro Ụbọchị Malitere Atụmatụ Ugboro ugboro kwa izu
Toronto (YYZ) - Orlando Sanford (SFB) October 9, 2021 3x Izu ụka
Hamilton (YHM) - Orlando Sanford (SFB) November 1, 2021 2x Izu ụka
Edmonton (YEG) - Orlando Sanford (SFB) December 3, 2021 2x Izu ụka
Winnipeg (YWG) - Orlando Sanford (SFB) December 10, 2021 2x Izu ụka
Suo bụ ụgbọ ala Canada nke dị ọnụ ala karịa nke WestJet nwere. Ekwuputara ọkwa ya na Septemba 27, 2017, wee bido ụgbọ elu na June 20, 2018. Ụgbọ elu ahụ hiwere isi na Calgary ma akpọrọ ya aha agụụ WestJet '' waba '' n'ahịa Canada site na iji ụdị azụmaahịa ọhụrụ.